एजेन्सी काठमाडौं, ८ साउन
संसारका कतिपय विषयबारे तपाई हामीमा जे धारणाहरु छन्, ति नै सही हुन् जस्तो लाग्छ ।
संसारका विभिन्न तथ्यबारे वैज्ञानिक म्याट ब्राउन पुस्तक लेखेका छन् । उनको पुस्तकको नाम ‘एभरीथिङ्ग यु नियू अबाउट प्लानेट अर्थ इज रंग’ (पृथ्वीका बारेमा जो तपाई जान्नुहुन्छ त्यो गलत हो) भन्ने रहेको छ ।
जुन पुस्तक तपाइले पढ्नुभयो भने आफ्नो जानकारीमाथि नै प्रश्न उठाउनु हुनेछ ।
२०६० वर्ग किलोमिटर 'नो मेन्स ल्यान्ड'
हालै जमिनलाई लिएर नेपाल र भारतबीच तथा भारत र चीनबीच तनाव चलिरहेको छ । यो मात्रै होइन जमीन, समुद्रको किनार, शक्ति र व्यवसायलाई लिएर शक्ति राष्ट्रबीच आपसमा संघर्ष हुने गर्छ । तर संसारमा केही स्थान ‘नो मेन्स ल्याण्ड’ को रुपमा छ ।
‘नो मेन्स ल्यान्ड’ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई देशको सीमामा रहेको खाली स्थान हो, जुन क्षेत्रलाई कुनै पनि देशले आफ्नो कानुनअनुसार नियन्त्रण गर्दैनन् । यद्यपि यसमा दाबी गर्न सकिन्छ ।
तर अफ्रिकामा एक यस्तो स्थान छ, जसमाथि कुनै पनि देश नियन्त्रण कायम गर्न चाँहदैन । बीर ताविल नामको यो इलाका २ हजार ६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको छ । यो क्षेत्र इजिप्ट र सुडानको सीमामा पर्छ ।
के पोर्चुगलका खोजकर्ता फर्डिनान्ड म्यागनल संसारको परिक्रमा गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए ? के उनले संसारको सबैभन्दा ठूलो समुद्रलाई आफ्नो नाम दिएका थिए ? यस्तो होइन ।
सन् १४८० मा जन्मिएका फर्डिनान्ड प्रशान्त महासागर पार गर्ने पहिलो व्यक्ति चाँहि थिए । सन् १५१९ मा म्यागनल आफ्नो टोलीसहित समुद्रको बाटोमा स्पाइस द्विप खोज्नका लागि निस्किएका थिए । केही देश भएर हिँडेको तीन वर्षपछि यो समूह सोही स्थानमा नै फर्किएको थियो ।
समुद्रको किनारमा जमिन हुन्छ ?
हामी पानीले भरिएको समुद्रको अर्को किनारा सायद पत्ता लगाउन सक्दैनौं भन्ने ठान्छौं । तर समुद्रको किनारा अवश्य हुन्छ । केही समुद्र त चारै तर्फबाट जमिनले घेरिएका हुन्छन् । जस्तो भूमध्य सागर र काला सागरलाई लिन सकिन्छ ।
भूकम्प रिक्टर स्केलमा नापिन्छ ?
स्कुलमा हामीले भूकम्पको तिव्रता रिक्टरस्केलले नापिन्छ भनेर सिकेका छौं । सन् १९३० मा भूगर्भ विशेषज्ञ चार्ल्स रिक्टर र बेनो गुटनबर्गले केबल क्यालिफोर्नियामा भूकम्पका कारण पैदा हुने ऊर्जाको मापन गर्नका लागि यसको निर्माण गरेका थिए ।
यो एक प्रकारको सिस्मोग्राफ थियो । यसैकारण सन् १९७० मा एक नयाँ प्रणाली सिस्मोलोजिकल स्केल जन्मियो । सिस्मोलोजिकल स्केलको प्रयोग ठूलो मात्रामा हुने गरेको पनि छ ।
तर यो अप्ठेरो नाम भएकाले यसलाई पनि मानिसले रिक्टर स्केलका रुपमा नै लेख्ने गरेका छन् । तपाईले ८ रिक्टर स्केलको भूकम्प भन्ने पढ्नु भएको छ भने त्यसको अर्थ सिस्मोलोजिकल स्केल हो । (एजेन्सी)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, ८ साउन २०७७, ११:३०:००